1. Mitondra hafanana sy endrika hafakely ho an’ny latabatra ny fametrahana labozia eo aminy. Izay vera misy tongony ananana no ametrahana azy. Toa ity amin’ny sary ity na « bocal » no diovina tsara ka asiana rano sy voninkazo ao anatiny ary mampiasa irony labozia mitsingevana irony
2. Raha toa kosa ka tsy dia tia ireny labozia ireny dia « boule » fanaingoana hazonoely no apetraka eo ambony lovia. Atao izay mampifanaraka azy amin’ny lokon’ny servieta hampiasana. Raha tsy manana servieta fa lovia fotsiny dia ny “boule” miloko mena sy maitso no azo atambatra avy hatrany, ao anaty lovia.